पढाइ सुरू भएन! हेटौडाको सामुदायिक स्कुलले रेडियोबाट पढाउने – Health Post Nepal
२०७७ जेठ २९ गते १२:३२
लकडाउनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन-पाठन सुरू गर्न समस्या भएपछि हेटौंडामा रहेको सामुदायिक विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले असार १ गतेबाट रेडियो पाठशाला सुरू गर्ने भएको छ।
आधुनिकले प्रविधिको उपयोग गर्दै एफएम रेडियोबाट रेडियो पाठशाला सुरू गर्न लागेको हो। आधुनिकले सामुदायिक रेडियो, रेडियो सन्देश १०६.९ मेगाहर्ज र हेटौंडा एफएम ९६.६ मेगाहर्जबाट रेडियो पाठशाला सुरू गर्ने भएको हो।
आधुनिकले रेडियोसँगै टेलिभिजनबाट र अनलाइनबाट पनि कक्षा सुरू गर्ने तयारी गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरवंश बैंठाले जानकारी दिए।
बेवसाईटमार्फत वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको विद्यालयले प्रविधिको उपयोग गरेर रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनबाट पढाउन सुरू गर्न लागेको बैंठाले बताए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जेठ १८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै असार १ गतेबाट वैकल्पिक प्रणालीबाट पठन-पाठन सुरू गर्न आग्रह गरेका थिए।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिका कारण शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएको भन्दै मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ जारी गरिसकेको छ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि अन्य क्षेत्रसँगै शैक्षिक क्षेत्र पनि बन्द छ। तर लकडाउन कहिलेसम्म रहने? कहिलेबाट कक्षा सुरू हुने अन्यौलता भएपछि नमूना सामुदायिक विद्यालय आधुनिकले प्रविधिको उपयोग गरेर रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनबाटै पढाउने तयारी गरेको प्रधानाध्यापक बैंठाले बताए।
कक्षा ९ र १० का नेपाली र अग्रेजी दुबै माध्यमका विद्यार्थीलाई असार १ गतेबाट नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक र जनसङ्ख्या विषयको पढाइ सुरू गरिने उनले बताए। लकडाउन खुले पनि तत्कालै विद्यालय सञ्चालनको वातावरण नभएकाले विद्यार्थीलाई प्रविधिको उपयोग गरेर रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनबाटै भए पनि पढाउँदै जाने तयारीमा विद्यालय लागेको बैंठाको भनाइ छ।
९ र १० का नेपाली र अग्रेजी दुबै माध्यमबाट कक्षा सुरू गर्दा ९० प्रतिशितभन्दा धेरै विद्यार्थीले पढ्न पाउने बैंठाले बताए। विद्यालयले हरेक दिन बिहान १० बजेबाट ११ बजेसम्म रेडियो सन्देश १०६.९ मेगाहर्जबाट र रेडियोको फेसबुक पेजबाट पढाउने भएको छ भने ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म हेटौंडा एफएमबाट पढाउने भएको छ।
अनलाइनबाट विद्यार्थीसँगै अभिभावकलाई पनि आफ्ना नानीबाबुहरूलाई कसरी अध्ययनमा लगाउने, के पढाउने भनेर विद्यालयले छलफल गर्ने उनले बताए।
विद्यार्थीहरुका लागि आवश्यक भिडियोहरू अभिभावकलाई उपलब्ध गराएर हेर्न लगाउने लगायतका काम पनि हुने बैंठाले बताए। अनलाइन कक्षामा अभिभावकको सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले विद्यालयले अभिभावकसँग पनि छलफल गरिरहेको छ।